Nuxurka Qodobadii Wasiirka Waxbarashadu Shaqada Kagaga Joojiyey Agaasimaha Guud Iyo Falcelinta Jawaabta Uu Ka Bixiyey Agaasimuhu. |
Nuxurka Qodobadii Wasiirka Waxbarashadu Shaqada Kagaga Joojiyey Agaasimaha Guud Iyo Falcelinta Jawaabta Uu Ka Bixiyey Agaasimuhu.
Hargeisa(GNN) Kadib Khilaaf Soo kala Dhexgalay Wasiirka Wasaarada Waxbarashada Iyo Tacliinta Sare ee Somaliland Mudane C/laahi Ibraahim Habane Iyo Agaasimihii Guud Ee Wasaarada Waxbarashada Mudane Abiib Axmed Cali Ayaa halkan aanu idiinku soo gudbindoonaa Nuqulada Qoraalo Ay Warbaahinta Isu Dhaafsadeen.
QORAALKA WASIIRKA IYO QODOBADA UU U CUSKADAY SHAQO KA JOOJINTA AGAASIMAHA GUUD.
Wareegtada uu wasiirka waxbarashadu shaqada kaga joojiyey agaasimaha guud oo wargeyska Geeska Afrika Helay ayaa u dhignayd sidan “Mudane Agaasime guud tan iyo maalintii uu madaxweynuhu ii soo magacaabay inaan hogaamiyo wasaaradan oo aan xilkeeda la wareegay 7/11/2015, wax wada shaqayn ah kaamaan arag ilaa iyo maanta, agaasime guud oo xil haya laba arimood midkood ayuunbuu ku shaqeeyaa waa ta koowaade qorshe iyo siyaasad uu dejiyo oo wasiirkuna u ansixiyo, waa tan labaade qorshe iyo siyaasad uu wasiirku dejiyo oo uu fuliyo,mudane agaasime labadaas midnaba kumaad camal falin, waxaanad igu bilawday amar qaadasho la,aan.Capture
Laba tusaale ayaan ku xusuusinayaa, kalana ahaa dugsiga sare ee M.A Sheef oo aan kuu sheegay inaad kaxaysato injineerada wasaarada soona qiimaysid baahida ay ardaydu ka soo cabatay oo ahaa dayactir la,aan, laab la,aan iyo maktabad la,aan iyada oo ay ahayd dhamaadkii bishi November ee 2015, manayse dhicin inaad qabato shaqadaas, markii aan ku waydiiyey sababta aad uga baaqsatayna iimaad sheegin wax lagu qanci karayey.
09/12/2015 subaxdaas oo aan u baxayey Nairobi xafiiskana aan idinkula sii shiray adiga, wasiir ku xigeenka iyo wasiirul dawlihii hore ayaan mar labaad ku faray inaad soo qiimayso, ka dib markii ay xaalada dugsigaasi(Sheekh Yuusuf Kaynuun) igu soo qayliyeen qaar ka mid ah waalidiintu soona arkay, nasiib daro kamaad ag wareeginba, hadalkaygiina waxba kamaad soo qaadin, hadaba dayactirkii iyo qalabkii kale ee ay dugsiyadu u baahnaayeen markii la soo dalbaday ee shirkadii fulisay soo codsatay kharashkii hadal iyo muran ayaad ka keentay iyo waliba diidmo inaad saxeexdo kharashkii baxay ee lagu fuliyey hawlihii dugsiyadaasi adiga oo ka baaqsaday xilkaagi
Intaas marka laga yimaado waxa kale oo aad sifo ka baxsan anshaxa shaqada kaga hor timid shaqooyinkii iyo barnaamijyadii wasaaradu u waday qaranka tusaale ahaan barnaamijkii tababarka macalimiinta ee ay fulinaysay wasaaradu lana soo wareegtay 2015, ilaa bilawgiisii mashruucaas si badheedh ah ayaad isku hor taagtay adiga oo khal khal iyo jaah wareerin joogto ah ku haya, su,aasha is weydiinta leh waxay tahay yaad kala shaqaysaa hawlaha wasaarada?.
Dhinaca kale hawlihii imtixaanka iyo cidii xaqa u lahayd inay gasho ayaad arbushtay, ka dib markii xafiiska imtixaanka masuuliyiintiisa aad isku dayday inay khasab kaga qaadaan arday fasalka shanaad ah imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada hoose dhexe, oo aad ka badheedhay si aad u fuliso nidaam sharci daro ah oo ka baxsan habkiisa iyo hanaankiisa,( Fiiri warqada ka soo baxday gudoonka waxbarashada gobolka gabiley ee ku taariikhaysan 24/12/2015, fiiri warqada aad u qortay xafiiska imtixaanaadka ee aad ku meel marinaysay sharci darada gudoonka waxbarashada gobolka Gabiley ka soo cawday, fiiri warqada jawaab celinta ee xafiiska imtixaanaadka 28/02/2016.
Sidoo kale barnaamijkii horu marinta manaahijta iyo sidii ardayda loogu heli lahaa kutub qiimo ahaan jaban ayaad u laxaadsatay sidii aad u fashilin lahayd, ilaa hadana maxadku uu ka shaqayn la yahay (Institute of Curriculum Development) tixraac warqada ka soo baxday xafiiskaaga MoE/Dg/0488/27/7/2016 ee ku lifaaqan halkan.
Waxaad ku guul daraysatay inaad ka soo baxdo xilkii, masuuliyadii, shaqadii aad u haysa wasaarada, marna may dhicin inaad wax qorshe iyo nidaam ah aad la timaado oo aad kula xisaabtanto agaasime waaxeedyada iyo gudoonka waxbarashada ee gobolada, waxaana ka muuqata wasaarada kala daadasho iyo hogaamin la,aan haysata oo fadhiid ka dhigtay maamulkii iyo shaqo maalmeedkii joogtada u ahaa hawlaha wasaarada oo sababay inay istaagaan, ka dib markii aad is badheedh ah u diiday socodsiinta, fulinta, qabashada iyo gudashadii waajibaadkaagii agaasime guudnimo.
Guntii iyo gaba gabadii waliba waxaad mar kasta oo aad arin isku qabataan masuuliyiinta wasaarada aad caado iyo dhaqan joogto ah ka dhigatay cay, aflagaado iyo wax qof masuul ahi aanu ku hadli Karin, oo ka baxsan ansha shaqada iyo dadnimada, waliba waxaad u gudbisaa oo aad gaadhsiisaa hay’addaha ajaanibka ah ee la shaqeeya wasaarada oo aanay waxba ka khusayn arimaha gudaha ee wasaarada, adiga oo qoraalkaas ku xusay inay wasaarada ka dhex socdaan arimo sharci daro ah iyo ajandayaal qarsoon, waxaana loo diri doonaa baadhitaan adiga oo cadayn doona,(fiiri mid ka mid ah dhambaaladii (Emails) aad u dirtay 11/05/2016 ee halkan ku lifaaqan), waxaad ku tilmaantay wasaaradii inay wado falal argagixiso.
Mudane agaasime guud wali xafiiska w.w. waxbarashada maad soo galin subaxna adiga oo ka waramaya hawl socodsiinta wasaarada iyada oo aan kuu yeedho mooyee, waxaad isku soo hoos xidhaa (hoosta ka qufushaa)xafiiska adiga oo waliba yar yahay imaanshaa xafiiskaaga.
Ugu danbayntii talaabooyinka isbadalka leh ee lagu horu marinayo waxbarashada, laguna tayeynayo dugsiyada dawliga ah iyo kuwa gaarka ahba si cad oo aan mugdi lahayd ayaad u curyaamisay, waxaanad siyaasadaha waxbarashada ku furtay dacaayado aad ku wiiqayso taaba galka hawlaasi.
Waxa la yaab leh warqada ka soo baxday xafiiska wasiirka ee ku saabsanayd isku bedalka shaqaale geeriyooday loona qabay baahi iyada oo la tix galinayey codsiga iyo baahida ee ka timid gobolada, sababta adiga oo agaasimihii wasaarada ah ugu feegartay amar qoraal ahna ku siisay agaasinka maamulka iyo lacagta inaan wax mushahar ah loo samayn, sida ku cad lifaaqan, Goormaad awooda intaas leeg yeelatay ee aad go,aan wasiir ku hor joogsatay?.
Waxaan yaqiinsaday kuna qancay inaad wasaaradan ku noqotay hagar daameeye, caqabad maamul, kuna abuurtay wasaarada ismaqal la,aan iyo kala amar qaadasho la,aan aad si joogto ah dhaqan iyo caado uga dhigatay, taas oo abuuraysa curyaamin maamul oo aan loo dulqaadin Karin maadaama oo ay wasaaradu xiligani gacanta ku hayso hawlo waaweyn oo la xidhiidha sii horu marinta waxbarashada qaranka.
Sidaas awgeed mar haddii aad ku guul daraysatay habsami u socodkii hawlaha maamulka ee wasaarada, isla markaana aad diiday oo aad iska dhago tirtay tilmamaha masuuliyiinta kaa saraysa, wasiiradiina aad u isticmaashay hanti aad leedahay oo kale, dhinaca kalana aad aqoonsanayn inay masuuliyiin kalaba kaa sarayso,qabtana inaad kaligaa masuul ka tahay wasaarada, kuna hadasho mar walba.
Mar haddii aad ku dhaqmi wayday tilmaamihii iyo talaabooyinkii lagu siiyey
Mar haddii aad u horseeday kala danbayn la,aan, ismaqal, ixtiraam la,aan aad ku riday wasaarada
Mar haddii afcaasha aad ku dhaqmayso ay wiiqday habsami u socodkii hawlaha maamulka ee wasaarada, taasina ay keenayso inuu baaqdo, dib u dhacyana ku yimaado adeegii bulshada ee wasaarada.
Sidaas darteed laga bilaabo saacada aad warqadan hesho ahna 06/08/216 waxaan kaa joojiyey xilkii agaasime guudnimo ee aad wasaarada u haysay, waxaana kaa reeban inaad xarunta wasaarada iyo xafiiskii aad ku shaqaynaysayba aad soo gasho laguguna arko amar la,aan.
Waaxaha wasaarada, maxadka manaahijta iyo xafiiska imtixaanaadka madaxdooda waxa lagu war gelinayaa lana farayaa inay la socdaan shaqo ka joojinta lagu sameeyey agaasihii guud, isla markaana ay si habsamiya ula shaqeeyaan cida si ku meel gaadh ahaana loogu magacaabi doono sii socodsiinta masuuliyadii iyo hawlihii xilka agaasime guud-nimo ee wasaarada waxbarashada iyo tacliinta sare.
W.W.T C/LAAHI IBRAAHIM HABANE
AGAASIMAHA GUUD OO ISNA CAAWA WARQAD QORAALA OO UU SOOSAARAY KAGAGA JAWAABAY WAXAY U DHIGNAYD SIDAN.
“Waxaan War saxaafadeedkan u qabtay maanta oo bishu tahay Arbaca 10 August 2016 in aan ka jawaabo fal aan sharciga iyo awoodaha wasiirka toona ahayn, oo uu ku talaabsaday wasiirka Wasaarada waxbarshada iyo tacliinta sare Mudane Cabdillahi Ibrahim Habane.
Asalkana Diinta islaamku waxay u timid in ay ilaaliso : Diinta, Nafta, Maalka, Caqliga, iyo Cirdiga(Sharafta) banii aadamka. Sidaa daraadeed,ilaalinta sharafta qofka banii aadamka ahi
sharftiisa iyo karaamadiisu waa waajib qofwalba saaran. Cidii ku xad gudubta sharfta qof kale ama xuquuqahaa kale waxay diinteena Islaamku xaq u siisay in uu is difaaco ama ka goosto inta lagu sameeyey in leeg. Hadii uu iska saamaxana abaal marin Eebe ka siiyo.
Waxanu Ilaahay SWT qoraankiisa ku yidhi:
Sura Shura(Juz25,40): Xumaan Abaalkeeduna waa ku abaal marin mid la mid ah. Ruuxii iska cafiyana oo wanaajiyana Ajri iyo Abaalmarin ayuu Eebaa siin. Illaahayna ma jecla daalimiinta.
Suratu Nakhal: (Juz14, 126)Hadaad wax ciqaabaysaan u ciqaaba inta laydin Ciqaabay, hadaad samirtaana isagaa u khayr roon kuwa samra.
Sidaa daaraadeed waxay shareecada islaamka xaq ii siinaysaa inaan difaaco karaamadayda iyo sharaftayda oo intii la igu sameeyey in leeg ka jaro qofka. Hadaba anoo raacaya ta ka khayr badan ee saamaxaada waxaanse xaq u leeyahay inaan saxo ta aniga la iga sheegay ee beenta ah oo ka sheego sida runtu tahay. waxaanan halkan kaga jawaabayaa oo kaliya wixii wasiirku lacagta badan ku bixiyey ee eedaymo ahaa ee isaga iyo Afhayeenkiisa yar ee daydaynimada reeraysan ku curyaamay saxaafada ku baahiyeen.
Hadaba inta aanan ka jawaabin eedaymaha waxaan jecel ahay inaan dib u jaleecno si koobana u sharaxo eedaymaha wasiirka:
Wasiirku waxa uu soo adeegsaday Askar Police ah oo uu keenay Wasaaradii Waxbarashada. Kuwaas oo iga hor joogsaday inaan soo galo W.W.&.T.Sare. Askartan oo aan haysan wax warqad ah oo faraysa amarkan. waxana markii aan su’aalay sababta ay ii hor joogsadeen iina dhiibeen warqad buqshad ah oo magacaygu ku qoran yahay, Waxayna igu yidhaahdeen waxay ka timid madaxtooyada ee oradoo la xidhiidh. “Anaga amar ayuunbaa lana soo siiyey” ayuu igu yidhi askarigii. Markii aan furay warqadahana wax warqad ah oo madaxtooyada ka timid kuma arag, hase ahaatee waxaan ku arkay warqada wasiirku ii soo qoray oo ay ku lifaaqan yihiin nuqulo warqado aan aniga iyo wasaaradu isku diray.
Wasiirka iyo Afhayeenkiisu waxay warsaxaafadeed ahaan ugu faafiyeen Saxaafada kala duwan iyo Baraha wararka ee “Guri Caareedyada Caalamiga ah” (International news websites) warqad aniga iyo hay’adaha dawliga ah qaarkood si gaar ah(Private) ugu socotay oo nuxurada qoraaladana warar aan sal iyo raad lahayn ka buuxdo, si ka baxsan sharciga, hab dhaqanka, anshaxa suuban, islaanimada iyo nidaamka wada shaqaynta xafiisyada dawladda loogu faafiyey.
Waxa wasiirku uu ku faafiyey dhaliilo been abuura oo uu ku tilmaamay inaan ka hor imid shaqooyinka iyo barnaamijyada wasaaradu u waday qarankan sida:
Hadaba mudanayaa iyo marwooyinba, waxaan doonayaa inaan halkan kaga hadlo falalka wasiirku uu sameeyey, isna waydiino maxaa sharci ah maxaan ahayn. Isla markaana kaga jawaabno eedaha kor ku xusan ee la igu eedeeyey.
Waxaa kale oo wasiirku igu eedayay inaan ka hor imid barnaamijyo waxbarasho oo ay ka mid yihiin kuwa ku xusan qodobka 4aad, sida:
Dugsigaa waan tagay waana la dhisay. Sabata uu iigu eedaynayo inaanan tagina waxa uu og yahay inaan diiday lacagta uu qandaraaska ku bixiyey. Waxaana uu ku qandaraasay laba fasal iyo Store yar lacag dhan $71,000. Illaahaybaan idinku dhaarshee ma qiimahaasa ku baxa laba fasal iyo store yar oo dhan 22m +dayactir daaqado. waxaan idiin sheegayaa fasalada standardka ah ee Hay’adaha wax noo dhisaa waa $8000-$10,000. Hadaba marka hay’adii lacagta haysatay intaa qandraas ku bixiso maxaa budgetka yar ee dawlada uga dhigay farajiin. mise waa dhaka kale oo waa loo dhuljeefeeyey.
Horta ilaahaybaa ina dilayee kama hor iman tababarka macalinka. Runtii waa mid aan u riyaaqsanaa laakiin waxaa diiday habka loo maamulayey oo ahaa mid aan daacad laga ahayn ee “Far Hunguri”loo samaystay. Waxaanan ku taliyey in lagu qabto Jaamacadaha dalka oo leh Collegeyada education iyo agab wanaagsan. kuwaas oo runtii wax ka tari jirey dakhliga Jaamacadaha iyo machadyada macalimiinta lagu tababaro. waxayna ahayd dakhliga kaliya ee soo gala jaamacadahaa, waayo ardayda badankeedu uma gasho xirfad ahaan macalinimada siday digriiyada kale. Waxaana kabi jiray tababaradana macalimiinta. Waxaanad u samaysatay Xisaab baaneed gaar ah “Bank Account”. kaas oo aanad la wadaagin Agaasimaha Guud ee ka masuulka ah kharashaadka wasaaradda. Halkaas oo ay ku soo dhacdo Fiidii Macalimiinta ee jaamacaduhu qaadan jireen.
ilaa imikana lacagta fiida cida qaadata aan la garanayn.
Tababarkaasi in lagu guul daraystayna waxaa markhaati kaaga ah oo aad adiguna usoo taagnayd markii subaxii sabtida 30 July 2016 shirkeenii Sabtiilaha ahaa gudidii loo diray xograadintu keentay warbixin toban page (10 Pages) ah oo baa ba’ ka dhigaysa hab maamulka tababarkii macalimiinta. Taasi oo aad wasiirku uga xanaaqay.
Mudane wasiir anigaa qaba in cidii dadaashaa ee imtixaan baasi karta ee si daacad ah u baastaa inay hore u socoto. Banii aadamka ilaahay maskaxdiiisa iyo fahankiisaba ma simin. Sidaa daraadeed Xafiiska Imtixaanaadka waxa loogu tala galay inuu imtixaan qaado, ee isaga dadka imtixaan intaas oo sano ma soo fadhiday fasal maaha shaqadiisa. Taasi waa wasaaradda siyaasadeeda cidii ay u ogolaanayso. Anigaana markaan soo baadhay u ogolaaday, kana cilmi badan gudoomiyaha oo isaguba BB ahaa laba sano ku sameeyey dugsiga sare. Waxaanad moodaa gudoomiyaha imtixaanaadku inuu yahay ninkii ku indha beelay ee madoodiga ma leegyaha waxwalba odhan jirey. Waan idiin sheegayaa fadlan imtixaanaadku waa fadhiid eh wax ha korodhsadaan. Miyaanay ogayn in gabadh yar oo 5 1/2 Shan iyo badh sano jirtay oo guri oo aabaheed ku baray imtixaanka GCSE Mathematics baastay.
Iyadoo oo xanaaqii warbixinta tababarka macalimiinta ay kugu jirto ayaa hadana waxa uu Agaasimaha Manaahijtu kuugu daray warbixintii buugta la qorayey. Markaasaa wax yaable oo wasaarada fajiciso ku noqday laga waramay. Qandaraas Qof loogu xidhay buugtii dalkoo dhan.
maalintii ku xigtay 31 July 2016 waxaan warqad u diray Agaasimaha Manaahijta oo ku idhi fadlan buugta oo softa ah iyo hal copy oo sample ah keen wasaaradda si loo eego inta aanay daabacaad galin. Waxuuse ii soo diray jawaabta tixraaceedu tahay ____________________
Inamadii gudoomiyayaasha buugtana oo aan ugu yeedhay kulan wasaaradda ahna waxuu ku amray in ayan iman.
Waxan ka xumahay inaanu wasiirku sifiican u akhriyin nuqulka emailka uu iigu soo lifaaqay oo si cad u tusinaysa taariikhda 11/05/2016 waqtiga 07:45PM in Wasiirku xigeenkiisu ii soo qoray email uu iigu hanjabayo oo uu tusayo ama siiyay CC dadkale oo ajinabi ah inuu booska yahay.
Su’aasha ah waxaad ku sheegtay argagixiso wasaarada, fadlan wasiir halkay kaga taalaa emailka aad ka hadashay. Waxaa laga hadlayaa “Baadhitaan iyo lafa guris waxbarashada iyo himiladiisa” ma waxaad u qaadatay ESA/ESSP inay tahay argagixiso? Maan fahmin meesha aad erayadan ka keentay, malaa cadhadaa kuula gashay ee sidaa maad moodayn.